Zimbabwe Yoronga Kumisa Kutengeswa kwePlatinum Isati Yacheneswa
Zvita 27, 2011
Hurumende inoti ine hurongwa hwekumisa kutengeswa kwechicherwa che platinum isina kucheneswa, senzira yekumanikidza makambani anoita izvi kuvaka mafekitari anochenesa chicherwa ichi munyika.
Mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi, VaGift Chimanikire, vanoti kana platinum ikacheneserwa munyika, zvichasimudza mutengo wechicherwa ichi, uye danho iri richabatsira mukuvharwa kwemwena iri kuburitsa zvimwe zvicherwa zvakaita segoridhe nevanadium zvinenge zviri muvhu rinenge riine platinum iyi.
Zimbabwe ine makambani matatu anochera platinum anoti Zimplats, Mimosa pamwe neUnki.
Gore rapera, Zimbabwe inonzi yakakwanisa kutengesa platinum ine huremu hunosvika mazana maviri nemakumi masere ezviuru zvemaawunzi, izvo zvakaita kuti ive panhambo yechishanu panyika dzinochera platinum pasi rose, dzakaita seSouth Africa, Russia, United States neCanada.
Mutengo wechicherwa ichi uri kutambira pachiuru nemazana manomwe nemakumi matanhatu emadhora paawunzi imwe chete. China ndiyo inonzi iri kunyanya kutenga chicherwa ichi pasi rose.
VaChimanikire vanoti hurongwa hwehurumende uhwu huchamutsawo mabasa akawanda, uye huchaitwa husingamhanyiswe.
Nyanzvi mune zveupfumi, uye vachitungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, EMCOZ, VaJohn Mufukare, vanotiwo hurumende inobuda nepfungwa dzakanaka chose nguva zhinji, asi yozotadza kudzizadzisa.
Hurukuro naVaGift Chimanikire